Ikhabethe owesifazane yesimanje sika jacket phansi ifudumele waba omunye ezindaweni ezibaluleke kakhulu: nsuku zonke, kwi uhambo, ukuhamba edolobheni - kunoma isiphi isimo wayengeke ukophula. Khetha izinga phansi jacket Kulula, uma ukuchaza bona nenqubo ukhiye futhi unamathele kuzo. Kulokhu, eziseqhulwini ngalinye ihlukile, kodwa juqu material efudumele futhi esiwuhogelayo ezisetshenziselwa umkhiqizo senziwa.
jackets phansi Female "baone" ezahlukene elilungile intengo-ukusebenza ratio e ingxenye isitayela kalula imodeli (s). It uhlala kuphela ukunquma imodeli isabelomali, funda ukubuyekezwa kanye wenze isinqumo ukuthenga.
Female jackets phansi "baone" ezimweni eziningi zenziwa izinto ejwayelekile. Nabavoti: phezulu 100% polyester noma inayiloni, ukwahlukanisa - zemvelo phansi isilinganiso amangalelwe ka-80% kuya ku-20% of the esibayeni, ulwelwesi 100%-polyester, Racoon noma unogwaja. inkampani yokukhiqiza Russian elise Vietnam China, kula mazwe ahlelwe amalebula.
Zabesifazane ebusika jacket "baone" ungakwazi sithathe anhlobonhlobo osayizi, kusukela kwesincane kunazo zonke futhi XXS ukuba XXL kanye 3XL ngobukhulu.
Ngisho umkhiqizo amahle kakhulu futhi stylish angabukeka alithandeki uma ukukhetha ubukhulu okungalungile noma isitayela. Ngakho-ke, pre-sihlaziye umzimba wakho uhlobo, nalabo ongakhetha outerwear owawuzovumelana okuhle. Sicela uqaphele ukuthi zonke jackets phansi kwenqwaba ahlale kahle Skinny kuphela amantombazane-model. Ngakho-ke kungcono uzame umkhiqizo, uma unokungaba ekukhetheni design nesitayela, kunokuba uyithenga esitolo online.
jackets Female phansi "baone 'nakho abanye isilinganiso udumo ubude. I okwenyanga ethandwa kakhulu ngokwesiko kubhekwe Imodeli owufanelekela kuya maphakathi no-ethangeni - siyindlela enemisebenzi bonke izikhathi. Eyesibili ethandwa kakhulu kuyinto ibhantshi-elingenamikhono afika emadolweni futhi waba. Lenza kahle iziketi kanye jeans. Ucedzela lemitsatfu lemifisha phansi jacket abayitoho noma ezemidlalo hlobo. Kungcono ukuhlanganisa ebusika, ibhulukwe ngci.
jacket Long phansi ubukeka umbukwane obhince ibhande ububanzi, egcizelela ngalé womuntu le hourglass. obuphelele iDemo kumele eshelelayo ngenxa side ngalé izicathulo noma isigqoko nge pompom. Down jacket kuya maphakathi no-ethangeni kahle izobukeka nge izicathulo ngesikhathi yedwa ongaphakeme, futhi onobuhle High Heels. Ngo-2016 kwafika ku fashion jackets transformers.
Wena awusoze yonakale ngokukhetha inkathi abesifazane phansi jackets "baone" shades abamnyama, abamhlophe, blue, grey noma beige zakudala. Lezi imibala jikelele, futhi zingaphezu kwethonya yemfashini.
Ebusika inkathi 2015-2016 ezibhekwa ibe yinkulu hit phansi jackets nge wezimbali. Ukukhokhela ukunakekelwa okukhethekile ukuze le mikhondo oluxube ezinkulu. Ngisho noma jacket phansi umbala esiqinile, ungakwazi ukuzivumelanisa naso ke ukubonisa lokhu mkhuba, ngiphakamisa izicathulo nge wezimbali noma cap ne-decor ezifanele.
Omunye endaweni ethandwa ngo-2016 lezi zimo zezulu zokuzenzela nge motifs ehlathini, sifihle imibala ezihlukile omnqumo ngesitayela ezempi.
Phakathi izinguqulo ezinombala ofanayo uqaphele ezinsomi, ezibomvu onsundu, oluhlaza futhi ephuzi imikhiqizo "baone". Syech kwabesilisa nabesifazane inikeza bomkhiqizo anhlobonhlobo tinting izixazululo yonke ukunambitheka.
Ekuthuthukiseni imodeli phansi jackets, umklami "baone" umnyango uyakucabangela ezihlukahlukene izidingo nezinto ezithandwa amakhasimende abo. Lokunye lokubaluleke kakhulu umthelela yemfashini emhlabeni. brand nefilosofi - ukudala izingubo ngohlamvu evumela ukugqama ngemuva endaweni ahlukahlukene ezisemadolobheni.
Uphaphe ngombala - Ngokuyinhloko noboya kanye amabhande. Sebenzisa ezihlukahlukene izesekeli, lesikhumba, indwangu, metal iziqobosho, omfisha, ethafeni noma okungafani umbala umbani. Raccoon noma Unogwaja umbukwane kwalokho onobuhle. It kwenza lo mlando charm ebusika isimo kwesizini. Practical yikhono unfasten noboya kanye hood, okuyinto kusiza kakhulu ukunakekelwa komkhiqizo.
Izincomo zokunakekelwa Izibuyekezo
Jacket "baone" owesifazane (izibuyekezo uvumele ukuhlaziya nokusebenza emfushane) kuyahluka ukufudumala, kalula, isitayela yokuqala, izinga kuphela nezihlanganiso, futhi ezihlukahlukene imibala amahle. Njengami, abaningi ngalé owufanelekela okungukuthi slimmer futhi ukunika ithuba ukugqoka umkhiqizo ngaphandle ibhande. Jacket kalula ukumelana okushisa afinyelela ku -20-30 degrees kuye ngobude iphethini. Isici ewusizo - hood detachable, kanye khona cuffs wathungela kwezinye ezahlukeneyo umkhiqizo.
Down jacket ngempela linesizotha ekunakekelweni: ukugeza at degrees 30 ngokumnandi Imodi nge uhlambulule kabili bese spin omncane. Kubalulekile ukuze ome umkhiqizo bese "break" fluff.
Phakathi amaphutha: Ayihaba intengo onobuhle eqolo ezinye umkhiqizo emva ukuwasha Umqansa fluff.
Uma uhlole "kochwepheshe" futhi "nebubi" jacket "baone" uyoba kwalokho elikhulu izingubo zakho futhi izothatha inkathi engaphezu kweyodwa, uyoletha imfudumalo athokozise.
Indlela ukucacisa osayizi amasokisi? Ithebula ukukusiza
Down jackets Joutsen - ubeqhakambisa weightlessness nokufudumala
Skirt - kuyini? Umlando kanye nencazelo
Yini inhlanganisela jeans nge okhalweni okusezingeni eliphezulu?
Indlela yokudweba ngamatshe ipensela: isinyathelo ngesinyathelo imfundo
Dmitry Bozin, umlingisi: Biography, empilweni yakho, i-Filmography
Kanjani futhi kangakanani ukupheka yenkomo isibindi kuze kuphekwe?
Yini ukubona e Sochi? Sochi - Izikhangibavakashi
Wenzenjani ukuchitha phakathi nehora lokuqala ngemva umsebenzi? Ithola empumelelweni yakho
Indlela obumbene enhle. Amathiphu wazibonela sezisebenzi ezinamakhono
Omthende lodonga - umhlobiso ingaphakathi